Kudingeka abasakazi abanolwazi nobuciko emoyeni – Bayede News
Kudingeka abasakazi abanolwazi nobuciko emoyeni
Kungiphindlile ngempelasonto edlule ngazithola ngilalele umsakazo
Posted on 7 November 2019 13 November 2019 by nguDez Khumalo
Kungiphindlile ngempelasonto edlule ngazithola ngilalele umsakazo esikhundleni sokubuka ithelevishini. Ngiwuntu onobuthaka nowenzelelayo uma kumele ngikhethe phakathi kokulalela umsakazo nokubuka ithelevishini. Isizathu salokhu angisiqondisisi kahle kodwa ngisola sengathi sihambisana nokuthi umsakazo ngawazi kuqala kunethelevishini.
Ngithi umsakazo ngawazi kuqala nje, abasakazi enganqwamana nabo begibele igagasi lomoya kwaba abantu ongathi babekhethwe ngokwazelwa amakhono nokudepha kolwazi lwabo ngezithinta umhlaba esikuwo. Ngiyabakhumbula nje oBaba uHubert Sishi, oGuyborn Mpanza, oKing Edward Masinga, oStanley Boy Hadebe oThetha Masombuka noReminghton Luthuli. Babethi behluke ngamazwi kodwa futhi nolwazi ababesinikeza lona lwalwehluka ngomuntu nomuntu. Uma uya ezinqolobaneni zeNhlangano Yokusakaza Ngomoya eNingizimu Afrika (SABC) ulalele izinhlelo zalaba basakazi uyothola ukuthi zikhombisa ukuthi babekukhathalela abakwenzayo. IJazz eyayethulwa nguThabekhulu (uGuyborn Mpanza) yayizimele qekelele; imilando yakwaZulu okuyindabamlando kaNzimase (uHubert Sishi) eluchungechunge eyayithinta aMakhosi oselwa esizwe samaZulu ayikafaniswa nalutho. Angikhulumi ngezinga lokudlala labalingisi abafana noBaba uJ.J. Meyiwa, oRoyal Jali, oGertie Msane nabanye.
Ukuzithola kwami ngilalele umsakazo esikhundleni sokubuka ngihalalisele amaBhokobho ethatha iNdebe yoMhlaba bekungenxa yokuhanjelwa wugesi endaweni. Kuke kwafika ukucasuka uma ugesi uhamba kwazise kusuka liqala isonto eledlule ayikho enye indaba ebikhulunywa ngaphandle kokungena kwamaBhokobhoko kweyamanqamu omhlaba nalokho abezokwenza eqenjinini lombhoxo lase-England. Sekuwumlando ukuthi abafana bakaRassie Erasmus benze ezibukwayo babuya neNdebe iWeb Ellis. Obekuwukucasuka kimi ngivula umsakazo ngoba ugesi wokuthi ngibuke ithelevishini ungekho kube nomphumela ebengingawulindele neze. Ngizokuyeka okokuthi indlela abesakaza ngayo uMthunzi ibichemile inanokwenzelela ngendlela eyisimanga. Ubezihambela namaBhokobhoko umdlalo uqala waze wayophela futhi nami angilikhulume iqiniso lokuthi noma ngabe benginawo amandla okumkhuza bengingeke ngakwenza lokho. Neyami inhliziyo ibingemuva kwamaBhokobhoko, okuchaza ukuthi bengingacishe ngenze okufanayo. Okuthathe inhliziyo yami ngomsakazi uMthunzi wukujula kolwazi analo ngomdlalo umbhoxo nemvelaphi yawo ikakhulukazi uma kuthinta umlando wokudlalwa kwawo e-Eastern Cape. Kuningi engikufundile ngemvelaphi yabadlali abanjengokaputeni uKolisi, uMapimpi, uMbonambi nokuthi uRassie Erasmus ugcine kanjani ephethe leli qembu.
Uma abazi kangcono bechaza umehluko phakathi komsakazo nethelevishini bathi: “Umsakazo uncike kakhulu emsindweni ukuze kwakheke isithombe esicacile emqondweni womuntu olalele abesefunda kabanzi ngalokho okukhulunywa ngakho. Ngakolunye uhlangothi, ithelevishini iveza izithombe kube uwena obukayo ozihumushelayo ukuthi zisho ukuthini.”
Lokhu okushiwo ngasenhla kusinika umyalezo wokuthi ukuze abantu baqhubeke balalele umsakazo, namanje oseyindlela eshibhile neletha kalula ulwazi kubantu, izikhulu zemisakazo ake ziqashe abantu abanekhono lokubeka indaba kamnandi babe ngabafundile futhi. Izilulu zemisakazo zidinga ukuphathwa ngabantu abanolwazi olujulile abazoludlulisela kubasakazi okuyibona bexhumana nabalaleli ngegagasi lomoya. Umsakazi woMhlobo Wenene abambize ngoMthunzi ukuveze obala ukuthi ngaphambi kokuyosakaza lowa mdlalo webhola lombhoxo uqale ngokuyokwenza ucwaningo ngabadlali nangawo wonke umdlalo kusuka kwabebewuphethe kuya kubadlali bamaqembu womabili.
Bebenza njalo ngaleziya zikhathi oGuyborn Mpanza uma besethulela ijazz emsakazweni, babenze njalo oBaba u-Alexius Buthelezi uma besethulela isicathamiya. Sabazi kanjalo oMzolo Mbube Group, oDlamini Home Defenders noMpangeni Home Tigers. Nasemisakazweni yesilungu oMichael Demourgan babesifundela ngothando nentshisekelo izindaba ezaziqale ngokuhluzwa. UMhlobo Wenene, iSafm neRadio 2000 bezwakala besalibambile isiko lokuqasha abasakazi abanolwazi kodwa kwezinye iziteshi zomsakazo sengathi inkinga inkulu.
Uhulumeni ubukeka enomsebenzi wokwenza isiqiniseko sokuthi imisakazo ibuyela esikhathini sakudala lapho abantu ababekwe emva kombhobo kungabantu abangathathwanga emakilabhini ngokubanga umsindo kodwa kungenxa yokujula kokucabanga nolwazi abanalo. Umsakazo uyindlela eshibhe kakhulu uhulumeni angayisebenzisa ukudlulisela ulwazi kubantu, ikakhulukazi esimweni lapho umnotho untekenteke. Nokho lokhu kudinga abantu abanobuciko, ikhono, ukuhlakanipha nolwazi olungangabazisi.
Ngicabanga ukuthi isililo esiqhuma nxazonke ngokudlula emhlabeni komsakazi uXolani Gwala singenxa yakho lokho. Ubengomunye wabambalwa abasasele abenze umsakazo waba yinkundla ebalulekile yokuxhumanisa abantu nokubanikeza ulwazi oluzobenza baphile kangcono. UNomshado Twala ethula uhlelo lwejazz ngeSonto emini wenze okufanayo ekhombisa ukujula nokuvuthwa kolwazi lwakhe lwalolu hlobo lomculo.
Laba basakazi babukeka bemele okwakuyiyona nhlosongqangi yensizwa yeNtaliyane uGuglielmo Marconi nokunguyena owasungula umsakazo ekuqaleni kwekhulunyaka lamashumi amabili. Akawusungulelanga umsakazo ukuthi indawo yawo ithathwe yithelevishini noma ibe yinkundla yabantu abangazihluphi ngokucwaningisisa ulwazi abazoludlulisela ezigidini zabantu abawulalelayo.